मुटुको धडपडको कारण के हुन सक्छ? - स्वास्थ्य शिक्षा | सेप्टेम्बर 2021
स्वास्थ्य शिक्षा, कल्याण स्वास्थ्य शिक्षा, समाचार कल्याण कम्पनी, औषधि जानकारी प्रेस समाचार, कल्याण कम्पनी, समाचार कम्पनी औषधि जानकारी, समाचार कम्पनी, स्वास्थ्य शिक्षा समुदाय, कल्याण समुदाय, कम्पनी मनोरञ्जन घरपालुवा जनावर समुदाय
मुख्य >> स्वास्थ्य शिक्षा >> यहाँ वास्तवमा के हुन्छ जब तपाईंको मुटुले धडकन छोड्छ
यहाँ वास्तवमा के हुन्छ जब तपाईंको मुटुले धडकन छोड्छ
जब तपाइँ मुटुको धडधड भन्ने शब्द सुन्नुहुन्छ, यो गम्भीर लाग्छ - तर वास्तविकतामा, ती केहि हुन् जुन धेरै मानिसहरूले प्रत्येक दिन अनुभव गर्दछन्। तिनीहरू तपाईको छातीमा महसुस हुने बडबड गर्छन् जब तपाईको क्रस हिंड्छ। वा, तपाईको मुटुको संवेदना एक क्षणको लागि रोकिन्छ जब तपाइँ खराब समाचार पाउनुहुन्छ। तिनीहरू रेसि,, पसीना महसुस हुन सक्छ सुदाफेड को एक खुराक पछि तपाईं छ। मुटुको धडपडको कारण के हुन सक्छ? त्यहाँ धेरै चीजहरू छन् जुन ती ल्याउँछन्। यहाँ छ कि जब भावना सौंपा छ जान्न को लागी, वा अधिक गम्भीर केहि को संकेत।
मुटुको धडपड के हो?
धमकी सामान्यतया महसुस गरिएको अनुभूतिलाई वर्णन गर्नुहोस् जुन तपाईंको मुटु फडबडिरहेको छ, पौडिंग, फ्लिप-फ्लपिंग, रेसि,, वा एक ताल छोड्दै छ। तिनीहरू सामान्यतया एक स्थिति वर्णन गर्दछ जब तपाईंको आफ्नै मुटुको धडकनको बारेमा तपाईंको जागरूकता एक कारण वा अर्को कारणको लागि बढाइन्छ।
जबकि मुटुको धड्कन असन्तुष्ट हुन सक्छ, जब ती विरलै देखिन्छन्, तिनीहरू प्रायः हृदय रोगको लक्षण हुँदैन। प्रायः सबैजनाले यसलाई समय समयमा महसुस गर्छन्, लिओनार्ड पियानको, MD, हृदय रोग विशेषज्ञ भन्छन् Aventura हृदय केन्द्र । धेरै जसो मुटुको धडपड सौम्य हुन्छन्।
एक महिलाले कति d3 लिनु पर्छ?
वास्तवमा, तिनीहरू सबै उमेर समूहहरू बीच धेरै सामान्य छन्, Fahmi फराह, एमडी, हृदय रोग विशेषज्ञ भन्छन् Baylor स्कट र सेतो स्वास्थ्य र बेंटले हार्ट। 20 65 बर्ष भन्दा बढि उमेरका मानिसहरूलाई सबै बाटोमा 20 वर्षका धेरै मानिसहरू धब्बाई दिन सक्छन्।
मुटुको धडपडको कारण के हुन सक्छ?
मुटुको धड्कन धेरै सम्भावित कारणहरू छन्। मुटुको धड्कनका लागि तल केहि सामान्य, प्राय: हानीरहित स्पष्टीकरणहरू छन्:
भावनाहरु: भाँचिएको हृदयको कारण मर्दा र मृत्युलाई डराउने वाक्यांशहरू पूर्ण रूपमा बोलचालका छैनन्। धेरै अध्ययन चिन्ता, तनाव, आतंककारी हमला, र अन्य कडा भावनात्मक अनुभवहरू अनियमित हृदय ताल, जस्तै धकधकीमानुसार बाँधेका छन्। जब तपाईं एक कडा भावना महसुस गर्नुहुन्छ, तपाईंको शरीरले हर्मोनहरू रिलिज गर्दछ जुन तपाईंको मुटुको धडकनलाई असर गर्दछ। कोविड १। महामारीको साथ, मुटुको धड्कन बढाउन चिन्ताले साँच्चै ठूलो योगदान पुर्‍याउँछ, डा फराह बताउँदछन्।
जोडदार गतिविधि : जब तपाई व्यायाम गर्नुहुन्छ, तपाईको मुटुको दर र हृदय उत्पादन (तपाईको शरीरमा प्रत्येक मिनेटमा रक्त परिक्रमा गर्ने मात्रा) उल्लेखनीय बृद्धि हुन्छ। यो अन्यथा स्वस्थ मानिसहरूमा धकधक हुन सक्छ - विशेष गरी यदि तपाईंले लामो समयसम्म काम गर्नुभएन भने।
हर्मोन परिवर्तन: मासिक धर्म, गर्भावस्था, र रजोनिवृत्ति भन्दा ठीक समयमा हार्मोनको स्तरमा भिन्नताले हृदयको विकृतिहरूलाई ट्रिगर गर्न सक्छ। ओभर्याक्टिव थाइरोइड डिसअर्डरहरू, जस्तै ग्रेभ्स रोग वा विषाक्त थाइरोइड नोड्युलले धमकीमा पार्न सक्छ। फेच्रोमोसाइटोमा भनिने दुर्लभ एड्रेनल रोगले तनाव हार्मोन बढाउँदछ, जसले नराम्रा र छाती दुखाइको परिणाम दिन्छ।
उत्तेजकहरू: निकोटिन, कोकेन, एम्फ्याटामाइन्स, र अन्य उत्तेजकले सबै हृदय गति परिवर्तन गर्न सक्छ। प्रभावको डिग्री व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा फरक हुन्छ। जबकि धेरै हृदय धड्कनहरू ऐतिहासिक रूपमा क्याफिनको लागि जिम्मेवार छ, हालसालै अध्ययन बाट अमेरिकन हार्ट एसोसिएशनको जर्नल यस जडानलाई डिबंक गर्दछ। स्वस्थ व्यक्तिहरूमा, थप क्याफिनले पनि हृदय तालमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तनहरू गर्न सक्ने सम्भावना हुँदैन।
कम रक्तचाप: रक्तचापमा उतार चढाव धेरै कारणका लागि हुन सक्छ, जस्तै शरीरको स्थिति वा आहारमा परिवर्तन। जब तपाईंको रक्तचाप तल झर्छ, तपाईंको हृदयले क्षतिपूर्ति गर्ने एउटा तरिका मुटुको दर बढाउँदै रक्तको प्रवाहलाई सम्पूर्ण शरीरमा स्थिर राख्न मद्दत गर्दछ। धडकनमा भएको यो वृद्धिले मुटुको बडबड गर्न सक्छ।
औषधिहरू: औषधिहरू दम, उच्च रक्तचाप, र पनि अधिक काउन्टर decongestants को उपचार गर्न प्रयोग व्यक्ति मा निर्भर हृदय धड्कन पैदा गर्न सक्छ।
कम रगत चिनी: जब तपाईं धेरै भोकाउनुहुन्छ, तपाईं कमजोर, पसिना महसुस गर्न सक्नुहुन्छ, वा तपाईंको मुटु दौडिरहेको छ जस्तो लाग्न सक्छ। यस प्रकारको पल्पिटेशन एड्रेनालाईनले ट्रिगर गर्दछ, हर्मोनले तपाईको शरीरलाई खानाको अभावका लागि तयार पार्न जारी गर्दछ।
ज्वरो: जब तपाईंको शरीरको तापक्रम उच्च हुन्छ, तपाईं सामान्य भन्दा छिटो उर्जा प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ। यसले तपाईंको मुटुको दरलाई असर गर्न सक्छ।
रक्सी: वयस्क पेय पदार्थहरूमा ओभरइन्डलिging्ग गर्नाले तपाईंको मुटु छिटो धड्कन सक्छ, यसले तपाईंलाई फडफडाउने भाव दिन्छ।
केहि चिकित्सा अवस्था: डा। पियानको अनुसार थाइरोइड समस्या, उच्च रक्तचाप, र भल्भुलर हृदय रोग केही मेडिकल सर्तहरू हुन् जसले धमकी दिन्छ।
यदि तपाइँसंग कहिलेकाँही यी कारणहरु मध्ये कुनै कारण को लागी मुटुको धड्कन छ, यो सामान्यतया प्रमुख स्वास्थ्य मुद्दा होईन।
के मुटुको धड्कन गम्भीर छ?
धेरै हृदय धडकन चिन्ताको लागि कारण छैन। तर, त्यहाँ उदाहरणहरु छन् कि फडबडिरहेको भावना बढी गम्भीर कुरा को संकेत हो। तिनीहरू कार्डियाक एरिथमियाको कारणले हुन सक्छ। हृदय शर्तहरूको समूह जसले मुटुलाई ढिलो र चाँडो हराउँछ। सब भन्दा साधारण प्रकार समावेश:
एट्रियल फाइब्रिलेशन वा AFib (अनौंठो, अनियमित मुटुको धडकन)
ब्राडीकार्डिया (ढिलो धडकन)
सुपरवेन्ट्रिकुलर टाचिकार्डिया (छिटो मुटुको धडकन जुन ventricles माथिल्लो कोठामा शुरू हुन्छ)
सौम्य र गम्भीर धडपड बीचको भिन्नता
नियमित रूपमा हुने हृदय धडकन धमनी अवरोध वा हृदय रोगको केही प्रकारको कारण हुन सक्छ। तपाइँको मुटुको बडबडको कारण निर्धारण गर्न, तपाइँको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकले तपाइँलाई थप परीक्षणहरूको लागि एक हृदय रोग विशेषज्ञको लागि सिफारिश गर्न सक्छ, जस्तै:
इकोकार्डियोग्राम मुटुको पर्खाल र भल्भहरू भए जस्तो उनीहरूले काम गरिरहेको छ कि छैन भनेर हेर्न
तनाव परीक्षण कसरी मेहनतले मुटुको कार्य र सास फेर्ने प्रभाव पारेको छ
इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम (ECG वा EKG) असामान्य हृदय तालहरू पहिचान गर्न
एक Holter मनिटर Porta पोर्टेबल ईसीजी उपकरण जसले लगातार २ to देखि hours 48 घण्टासम्म हृदय तालहरू रेकर्ड गर्दछ
निश्चित हुन मेडिकल सहायता लिनुहोस् वा 11 १११ मा कल गर्नुहोस् यदि तपाईंले पल्पिटेशनहरू बाहेक तलका कुनै लक्षणहरू अनुभव गरिरहनु भएको छ भनेः
छाती दुखाई / जकड़न
सास फेर्न वा सास फेर्न कठिनाई
यी कार्डियक अरेस्टको संकेत हुन सक्छ जुन जीवन धम्की दिन सक्छ।
सम्बन्धित: कार्डियक अरेस्ट बनाम मुटुको आक्रमण: कुन खराब हो?
स्वास्थ्य धम्की कसरी रोक्न
उपचारको बारेमा छलफल गर्नु अघि, तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकले तपाईंको इतिहास जान्नुपर्दछ: तपाईंको धडधड कति लामो समयसम्म रह्यो, उनीहरू कतिन्जेल रहन्छन्, केहि आन्दोलन वा परिस्थितिहरू छन् कि छैनन् - कुनै अन्तर्निहित स्वास्थ्य अवस्थाको साथ। धमकीले रक्तअल्पता हुने बिरूद्ध कसैको बिरूद्धको अन्तर्निहित फेफोको रोगको बिरूद्ध कसैको विरूद्ध संरचनात्मक हृदय रोग वा मुटुको विफलता भएको बताउँछ। नुपुर नरुला, MD , Well Cornell मेडिकल कलेज मा कार्डियोलोजी मा चिकित्सा को सहायक प्रोफेसर।
मुटुको फडफडाउने को मामिला मामिलाहरूको लागि, जीवनशैली समायोजनले फ्रिक्वेन्सी घटाउन मद्दत गर्दछ, वा रेसि heart मुटुको धडकन ढिलो बनाउन मद्दत गर्दछ। अधिक गम्भीर, लगातार धडपड औषधी वा एक शल्य प्रक्रिया को लागी आवश्यक हुन सक्छ।
कसरी तुरुन्तै उच्च रक्तचाप को उपचार गर्न को लागी
तपाइँको मुटुको धडपडलाई के ट्रिगर गर्दछ याद गरेर सुरु गर्नुहोस्। त्यसो भए, त्यो प्रोत्साहनको लागि तपाइँको जोखिम कम गर्न कदम चाल्नुहोस्। यी प्रविधिहरूमा केहि समावेश छ:
अभ्यास योग वा ध्यान: मुटुको धड्कनको सब भन्दा साधारण स्रोत चिन्ता हो। योग र ध्यानले तनाव प्रबन्ध गर्न मद्दत गर्दछ, जसले मुटुको बडबडलाई कम गर्न सक्छ।
गहिरो सास फेर्ने तरिकाहरू सिक्नुहोस्: सास फेर्न र मुटुको दर अक्सर सँगै जोडिएको हुन्छ। बक्स सास फेर्दै (चार सेकेन्ड सास फेर्दै, seconds सेकेन्ड होल्डि, गर्दै, चार सेकेन्ड सास फेर्दै, चार सेकेन्ड होल्डिंग) सास र मुटुको दरलाई नियमित गर्न सक्दछ, धड्कन कम गर्दछ।
क्याफिन सेवन सीमित गर्नुहोस्: जबकि क्याफिनले विश्वव्यापी रूपमा हृदय फडफडाउन सक्दैन, प्रत्येक व्यक्तिको फरक संवेदनशीलता हुन्छ। तपाईको कफीको उपभोगलाई कम गर्न सहयोग पुर्‍याउन सक्नुहुनेछ मुटु फडफडाउनबाट रोक्नको लागि।
धूम्रपान छोड्नुहोस्: धूम्रपान रोक्नाले तपाईंको निकोटीन एक्सपोजर कम गर्दछ, यस्तो पदार्थले मुटुको धड्कनहरू उस्काउन सक्छ।
नियमित रूपमा खानु: अनुसरण गर्दै स्वस्थ खाना , र नियमित खाना खान्दा स्पाइकहरू र तपाईंको रगतमा चिनीमा खस्केर रोक्न सक्छ जसले हृदयको धड्कनहरू निम्त्याउन सक्छ।
यदि मदिरा वा एक ओभर-द-काउन्टर औषधीले तपाईंको धडपडलाई ट्रिगर गर्दछ भने, तपाईंको हेल्थकेयर प्रदायकसँग त्यस पदार्थबाट बच्नको लागि योजना बनाउन काम गर्नुहोस्।
उदाहरणका लागि जहाँ जीवनशैली परिवर्तन पर्याप्त छैन, दुई प्रकारका औषधीहरू प्रायः हृदयको धड्कनको लागि प्रयोग गरिन्छ: बीटा ब्लकरहरू र केन्द्रीय अभिनय क्याल्शियम-च्यानल ब्लकरहरू। यी दुबैले तपाईको मुटुको धड्कन धीमा र नियमन गर्न सहयोग गर्दछ।
यदि अन्तर्निहित अवस्थाले तपाईंको मुटुको धड्कनहरू निम्त्याउँदैछ भने, उपचारमा उक्त अवस्थाको उपचार समावेश छ। उदाहरण को लागी, तपाई चिन्तित ब्यबहार गर्न मद्दत गर्नको लागि अटिभान सल्लाह दिन सक्नुहुन्छ। वा, तपाई ओभर्याक्ट्र्याई थाईरोइड (हाइपरथाइरोइडिज्म) को लागी एक पर्चेको साथ घर जान सक्नुहुन्छ।
कम सामान्य उदाहरणहरूमा, मुटुको धडकनले जीवनशैली परिवर्तन वा औषधीहरूको प्रतिक्रिया दिन सक्दैन। प्रक्रियाहरू जस्तै क्याथेर एबलेसन, पेसमेकर, वा इम्प्लान्टेबल डिफिब्रिलेटरको आवश्यक हुन सक्छ।
सबै मुटुको धड्कनको ठ्याक्कै कारण हुँदैन, र धेरैलाई मेडिकल उपचारको आवश्यकता पर्दैन। जे होस् उनीहरूले तनावपूर्ण महसुस गर्न सक्दछन्, तर स्वास्थ्य सेवा प्रदायकले तपाईलाई विश्वस्त गराउन दिनुहोस् कि तपाईले अनुभव गरिरहनु भएको खतरनाक छैन। केवल तपाइँका लक्षणहरूको नियमित समीक्षा गर्नुहोस्, र यदि कुनै परिवर्तनहरू भएमा सम्पर्क गर्नुहोस्।
छाला मा खमीर संक्रमण को लागी नारियल तेल
ह्या a्गओभर बाट छुटकारा पाउन के गर्न सक्छु?
एक त्वचा विशेषज्ञ एक नियुक्ति मा के गर्नुहुन्छ?
के पीसीपी को लागी एक गलत सकारात्मक कारण हुन सक्छ